WARARKA DIBADDA Archive | TOP NEWS
Raila Odinga oo hanjabaad ka keenay Guusha Uhurro Kenyatta ee Maxkamadu Ayiday
By Tifaftiraha Somalida Maanta on November 21, 2017 WARARKA, WARARKA DIBADDA
Hoggaamiyaha Isbahaysiga Mucaaradka (Nasa) Raila Odinga ayaa ka hadlay go’aankii Maxkamadda Sare ee dalka Kenya oo ayiday guusha madaxweyne Uhuru Kenyatta. Mr Odinga, oo hadal ka soo baxay usoo gudbiyay lataliyihiisa Salim Lone, ayaa sheegay in xukuumadda Jubilee ay tahay mid sharci-darro ah, isaga oo intaa ku daray in go’aanka Maxkamadda Sare uu ku yimid […]
Trump oo shaaciyey in Kuuriyada Woqooyi “taageerto argagixisada”
Madaxweyne Trump ayaa shaaciyey in Maraykanku mar labaad ku darayo Kuuriyada Woqooyi liiska dawladaha taageera argagixisada, sagaal sanadood ka dib markii laga saaray liiskaaa. Kulan golaha wasiirada, ayuu sheegay in dhaqaaqaasi bilaabi doono cunaqabatayno dheeraad ah oo “aad u balaadhan” oo la shaacin doono Salaasada. Laakiin xoghayaha arimaha dibadda Rex Tillerson ayaa markii dambe qirtay […]
By Tifaftiraha Somalida Maanta on November 20, 2017 WARARKA, WARARKA DIBADDA
Dowladda Sacuudiga ayaa si kulul u cambaaraysay waxa ay ku tilmaamtay faragalinta ay Iiraan ku hayso arrimaha dalalka Carabta. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga, Caadil Al Jubeyri,ayaa sheegay in dalkiisa uusan ka labalabayn doonin in uu is difaaco. Wasiirka ayaa hadal ka jeedinayay kulan degdeg ah oo ay yeesheen ururka Jaamacada Carabta kaasi oo ay Sacuudiga […]
Xisbiga Zanu-PF oo xil ka qaadis ku sameeyay hogaamiyihii xisbiga Mugabe
By Tifaftiraha Somalida Maanta on November 19, 2017 WARARKA, WARARKA DIBADDA
Ka dib kulan ay maanta ku yeesheen Magaalada Harare ee Caasimadda Zimbabwe, ayay Madaxweyne Robert Mugabe kaga qaadeen xilka hogaamiyaha xisbiga, ka dib 37 sano oo uu xisbiga soo hogaaminayay. Guddiga Dhexe ee Xisbiga Zanu-PF, ayaa waxay cod aqlabiyad leh Emmerson Mnangagwa ugu doorteen inuu noqdo hogaamiyaha xisbigooda. Emmerson Mnangagwa oo ahaa Madaxweyne Kuxigeenka Zimbabwe, […]
Madaxweyne Al-Sisi oo u hanjabay Dowlada Itobiya kadib markii uu sheegay inay…
Madaxweynaha dowladda Masar ayaa sheegay in dowladiisa aysan aqbali doonin in dowladda ay Itoobiya ay leexsato wabiga Biyaha Nile, oo labadal ay ku muransan yihiin. Waxaa uu sheegay in shacabka Masar ay diyaar u yihiin in ay iska difaacaan cidkaste oo kusoo duusho, una muuqata in ay doonayaan in ay qaataan qeyraadka ay leeyihiin dadka […]
Saraakiisha xisbiga Zanu-PF oo ugu baaqay Mugabe in uu xilka ka dago
By Tifaftiraha Somalida Maanta on November 18, 2017 WARARKA, WARARKA DIBADDA
Xisbiga talada dalka Zimbabwe haya ee ZANU-PF ayaa sare u qaaday cadaadiska uu ku hayo Madaxweyne Robert Mugabe, ninka awoodda dalkaasi haystay ku dhowaad 40 sano. Hoogamiyayaasha xisbiga ayaa Mugabe ka dalbanaya in uu xilka iska casilo kadib markii maalintii arbacada ay ciidamada Militariga la waregeen awodda dalkaasi. Madaxwayne Robert Mugabe ayaa la sheegay in […]
Madaxweyne Mugabe oo fagaaro kasoo muuqday ‘isaga oo mayal adag’
By Tifaftiraha Somalida Maanta on November 17, 2017 WARARKA, WARARKA DIBADDA
Madaxweynaha wali xilka ka raaraca ee Zimbabwe Robert Mugabe ayaa markii ugu horeysay kasoo muuqday meel fagaaro ah tan iyo intii maalmo ka hor ay ciidanka la wareegeen awoodda dalkaas. Mugabe ayaa ka qeybgalay xaflad qalinjabin ah oo lagu qabanayay jaamacadda Zimbabwe oo uu ka midyahay madaxda jaamacadda, wuxuuna halkaas ka jeediyay khudbad dheer. Sacad […]
Hoggaamiyihii kooxda Maafiyada Talyaaiga Salvatore ‘Toto’ Riina ayaa ku dhintay isbitalka xabsi ku yaalla magaalada Parma, kadib markii uu muddo la dagaalamayey cudurka cancer-ka. Waxa uu ahaa 87 jir. Riina ayaa dhintay subaxnimadii jimcaha saacado kadib markii wasiirka caddaaladda talyaaiga uu qoyskiisa u ogolaaday inay sariirta ku booqdaan maalintii khamiista oo ahayd dhalashadiisa. Ninkan oo […]
Boqorka Dalka Sacudiga, Boqor Salmaan Bin C/casiis oo dhawaan xilka ku wareejinaya Wiilkiisa
Madaxwayniha muddada dheer ka talinayay Zimbabwe Robert Mugabe ayaa la sheegay in uu diidan yahay in uu xilka ka dago ,iyada oo ay jiraan baaqyada ku saabsan in uu iscasilo. Mugabe oo 93 ah ayaa xabsi guri laga dhigay ka dib markii militariga Zimbabwe ay awoodda dalkaasi la wareegeen Arbacadii. Ma jirto wax faahfaahin ah […]